War deg deg ah:Wadooyinka madaxtooyada la xirtey & banaanbixii Muqdisho oo waji.. – SBC
War deg deg ah:Wadooyinka madaxtooyada la xirtey & banaanbixii Muqdisho oo waji..
Banaanbixii ka socdey wadooyinka qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho ayaa kadinka madaxtooyada DFKMG ah gaarey, iyadoo ciidamada dawlada ay ku biireen banaanbaxaasi, isla markaana sheegay inay ka soo horjeedaan heshiiska labada Shariif.
Banaabaxyaasha ayaa gabi ahaanba gooyey wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa xarunta madaxtooyada iyo waliba xarumo kale oo ku dhaw madaxtooyada.
Dadkii saaka ka banaanaxayey magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku biirey ciidamada dawlada kuwaasi oo sheegay in ay qabsadeen xarunta madaxtooyada waxaana ay sheegeen inaanay aqbali doonin inay halkaasi yimaadan Madaxweyne Sheekh Shariif & Gudoomiyaha Baarlamanka Shariif Xasan Sheekh Aadan, waxaana qaarkood ay sheegayaan inay ay aqoonsan yihiin oo kaliya Ra’isalwasaare Farmaajo.
Dadka banaanbaxaya oo gubaya taayirada gawaarida ayaa ku dhawaaqaya ereyo ay kaga soo horjeedaan gudoomiyaha Baarlamanka , iyagoo ku baaqaya in uu is casilo, sidoo kale waxay ku tilmaameen shirqool heshiiska madaxweynaha & gudoomiyaha Baarlamka, waxaana ay sheegeen in heshiiskaasi ujeedkiisu uu yahay in laga takhluuso Ra’isalwasaare Farmaajo.
Warar ayaa sheegaya in ciidamada dawlada KMG ah ee fadhiyey aagaga hore ee dagaalka in qaarkood ka soo baxeen goobahaasi kuwaasi oo sheegay inaanay difaaci doonin dawlada FKMG ah, waxaana laga cabsi in xaaladu isku badasho waji kale, jawiguna waa mid aad u kacsan.
Xaalada ka oogan magaalada Muqdisho ayaa u muuqanaysa jawi la mid ah kacdoonka wadamada Carabta, iyadoo dadweynuhu ay sheegeen inaanay u sii dulqaadan doonin in shacabka dushiisa lagu gorgortamo.
Warar dheeraad ah oo ku saabsan banaanbaxyadan iyo xaaladan cakarin SBC Online isha ku hay daqiiq daqiiqad.